I-Apple ibhengeza uLwandiso lweZiko ledatha laseReno | Ndisuka mac
Iziko ledatha le-Apple eReno
Izolo sithethe ngayo ngoku Utyalomali luka-Apple kwisiXeko saseReno lwedatha luqinisekisiwe ngokusemthethweni. Ulwandiso luya kuxabisa abafana baseCupertino malunga neebhiliyoni zeerandi kwaye baya kunceda ukugcina iiseva ezimbalwa ezizakusetyenziselwa iinkonzo zenkampani. Ngokwenyani iApple ityale imali eninzi kunye nemizamo kula maziko edatha kuba abasebenzisi bayaqhubeka nokufuna ukugcinwa okungakumbi nangakumbi kwilifu kunye nokuhamba kwexesha oku kuya kuqhubeka nokwanda.
Iinkampani zicacile malunga noku kwaye zifuna iindawo ezinkulu zamaziko azo edatha, kodwa amabhunga ezixeko ezi zixeko afuna indawo yawo kwaye kule meko kubonakala ngathi iApple kunye neBhunga lesiXeko saseReno bafikelele kwisivumelwano sokuba yamkelwe ngokusemthethweni. . Ukongeza kwiziko ledatha, ulwakhiwo lwendawo yokugcina izinto zeApple nayo yamkelwe eya kuhlala kweso sixeko.
Ekugqibeleni sisibhengezo esisemthethweni esipapashwe kumajelo osasazo ngumlawuli we-Apple wezorhulumente nemicimbi yaseburhulumenteni, UMike wenze iimpazamo. Isixeko seprojekthi yeReno eneziko ledatha lika-Apple besele siqhubeka iminyaka embalwa kwaye sikhula kancinci. Ngethuba elifutshane, imfuno yendawo efini ngabasebenzisi nayo inyuke ngokuqaphelekayo- kwinxalenye yokubonga ukwehla kwamaxabiso- kwaye oku kunceda la maziko akhule ngokuqhubekayo kwaye iinkampani zifuna iiseva ezininzi ezinje ukugcina ulwazi lwethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple ibhengeza uLwandiso lweZiko ledatha laseReno